I-Raw Orlistat Powder (96829-58-2) Abavelisi-i-Phcoker Chemical
I-Raw Orlistat powder sisiyobisi esisetyenziswa kunyango lokutyeba kakhulu. Umsebenzi wawo ophambili kukuthintela ukufunxwa kwamafutha asuka ekudleni kwabantu….
I powder OrLood (96829-58-2) ividiyo
I-Raw Orlistat powder ikudidi lwamayeza abizwa ngokuba yi-lipase inhibitors esebenza ngokuthintela ukufunxwa kwama-25% kumanqatha esidlweni kwaye asetyenziselwa ukunciphisa umzimba kubantu abadala abangaphezulu komzimba, abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu, xa isetyenziswa kunye ne-calorie encitshisiweyo kunye ukutya okunamafutha asezantsi. I-Raw Orlistat powder sisiyobisi esenzelwe ukunyanga ukutyeba. Umsebenzi wayo ophambili kukuthintela ukufunxwa kwamafutha asuka ekudleni kwabantu, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukutya kwe-caloric. I-Orlistat powder eluhlaza isebenza ngokuthintela i-lipancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwale enzyme, i-triglycerides evela ekutyeni ithintelwe ekubeni i-hydrolyzed ibe ngama-acid asimahla anokutsalwa kwaye akhutshelwa ngaphandle. I-Orlistat powder eluhlaza isetyenziselwa abantu abagqithisileyo abanokuba noxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, icholesterol ephezulu, okanye isifo sentliziyo. Ukusebenza kwePowder Orlistat powder ekukhuthazeni ukunciphisa umzimba kuyacaca kodwa kuthobekile. Idatha edityanisiweyo evela kuvavanyo lweklinikhi icebisa ukuba abantu banikwe ipowder ekrwada yeOrlistat ukongeza kwiinguqulelo zendlela yokuphila, njengokutya kunye nokuzilolonga, baphulukane neekhilogremu ezi-2-3 (4.4-6.6 lb) ngaphezulu kunalezo zingathathi iyeza kwisithuba sonyaka. I-Orlistat powder eluhlaza iyanciphisa ngokunyanisekileyo uxinzelelo lwegazi kwaye ibonakala ikhusela ukuqala kohlobo lwe-2 yeswekile, nokuba ivela ekulahlekelweni kwesisindo ngokwalo okanye ezinye iziphumo. Iyanciphisa izehlo zesifo seswekile II kubantu abatyebe ngokujikeleza isixa esilinganayo notshintsho kwindlela yokuphila.
I powder Orlistat emfutshane (96829-58-2) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-powder Orlistat
uhlobo Numama Alli, Xenical
Iqela leziyobisi lipase inhibitors
Inani leCAS 96829-58-2
I molecular Fi-ormula C29H53NO5
I molecular WSibhozo 495.745 g / mol
Ukuxuba Point <50 ° C
I-Biological Half-Life Ngokusekelwe kwidata elinganiselwe, isigamu-ubomi se-Raw Orlistat powder ingxowankulu kwi-1 kwiiyure ze-2.
Umzimba I-DMSO: 19 mg / mL
yoGcino Tukushisa Ixesha lokugcina. 2-8 ° C
Aukuguquka Sebenzisa ukunyanyisa ukukhuluphala.
Uluhlu oluthile i powder (96829-58-2) Inkcazo
I-powder Orlistat ephakamileyo kwinqanaba lemithi ebizwa ngokuthi i-lipase inhibitors esebenza ngokuvimbela ukunyuka kwe-25% yeenqatha ekudleni kwaye isetyenziselwa ukulahleka kwesisindo kubantu abadala abangaphezu komzimba, iminyaka engama-18 nangaphezulu, xa isetyenziswe kunye ne-calori eyancitshisiwe kunye ukutya okuncinci.
I-powder Orlistat ephuhlileyo isilwanyana esilungiselelwe ukunyanyisa ukukhuluphala. Umsebenzi walo oyintloko ukhusela ukuxutywa kwamafutha ekudleni kwabantu, ngaloo ndlela ukunciphisa i-caloric intake. I-powder e-Orlistat ebomvu isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwale enzyme, i-triglycerides esuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ixutywe ngaphandle. I-Orlistat yomdaka ogqityiweyo wesigqirha isetyenziselwa abantu abangaphezu kwamandla amaninzi abangase babe negazi eliphezulu, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu okanye isifo senhliziyo. Ukusebenza kwePowula okanye i-Orlistat powder ekunyuseni ukulahlekelwa kwesisindo kucacileyo kodwa kuthobekile. Idatha edibeneyo evela kwizilingo zeklinikhi ibonisa ukuba abantu banikezwa i powder Orlistat powder ngaphezu kwendlela yokuphila yokuguqulwa, njengokutya kunye nokuzilolonga, balahlekelwa malunga ne-2-3 kilogram (i-4.4-6.6 lb) ngaphezu kwalabo abangathathi iziyobisi ngaphezu kwexesha lonyaka. I-Orlistat powder i-Rawdat iyanciphisa ngokunyanisekileyo uxinzelelo lwegazi kwaye ibonakala ithintela ukuqala kohlobo lwe-2 sikashukela, nokuba sisuka kwindleko yesisindo ngokwaso okanye ezinye iziphumo. Iyanciphisa iziganeko zesifo sikashukela sohlobo II kubantu abanobukhulu besantya esilingana nomlinganiselo ofanayo wokuphila.
Orlistat powder (96829-58-2) Indlela yokuSebenza
I-Orlistat powder luhlobo lwe-lipase oluvimbela ukulahleka kwesisindo kunye ne-hydrated derivative ye-lipostatin. I-Orlistat ngokufanelekileyo nangokukhetha inqanda isisu se-lipase kunye ne-pancreatic lipase, ngelixa ingenampembelelo kwezinye ii-enzymes (ezifana ne-amylase, i-trypsin kunye ne-chymotrypsin) kunye ne-phospholipase, kwaye akuchaphazeli ukufunxwa kwee-carbohydrate, iiprotein kunye ne-phospholipids. Eli chiza alifunxwanga nangona iphecana lesisu kwaye linesiphumo sokubuyisela umva kwilipase. I-Orlistat icima ii-enzymes ngokubopha ngokudibeneyo kwindawo eseleyo ye-serine kwiindawo ezisebenzayo zesisu kunye ne-pancreatic lipase. Oku kuthintela amanqatha ekutyeni ukuba angahlulwa abe ziiasidi ezinamafutha simahla kunye ne-diacylglycerol, ke ayinako ukufunxwa, ukunciphisa ukuthathwa kwekhalori kwaye ke ngoko kulawula ubunzima bomzimba. Eli chiza alifuneki ukuba lifunxwe ngumzimba wonke ukuze lisebenze. Umsebenzi we-Orlistat we-pharmacological uxhomekeke kwidosi: idosi yonyango ye-Orlistat (120mg / d, tid, ethathwe kunye nokutya), ngokudityaniswa nokutya okunekhalori esezantsi, kunokunciphisa ukuya kuthi ga kwi-30% yokufakwa kwamafutha. Kwisifundo ngokuthelekisa amavolontiya aqhelekileyo kwaye atyebile, i-Orlistat yayingafakwanga ngumzimba kwaphela kwaye yayinegazi eliphantsi kakhulu. Emva kwedosi enye yomlomo (eyona inkulu eyi-800mg), uxinzelelo lwegazi lwe-Orlistat kwezi zilandelayo iiyure ze-8 yayingu- <5 ng / ml. Ngokwesiqhelo, idosi yonyango ye-Orlistat ifakwa emzimbeni kuphela kwaye ayizukuqokelelana ngexesha lonyango olufutshane. Kwilinge le-in vitro, inqanaba lokubopha le-Orlistat kunye nezinye iiproteni ze-serum zigqithile kwi-99% (iiproteni ezibophekileyo ubukhulu becala yayililopoproteins kunye nealbumin), kwaye inqanaba lokubopha ngeeseli ezibomvu zaziphantsi kakhulu.
Iinzuzo ze-Orlistat powder (96829-58-2)
▪ I-Orlistat inciphisa ubunzima bomzimba ngaphezulu kwe-20% ngeendleko zamafutha omzimba
▪ I-Orlista ikunceda ufunde ukubala iikhalori
▪ I-Orlista ikwenza uzive wonwabile
▪ I-Orlista ineziphumo ezilungileyo zibonelela ngokuzithemba kunye novuyo kubasebenzisi
▪ I-Orlista ibonelela ngeziphumo zexesha elide ezinzileyo
▪ I-Orlista inciphisa ubunzulu bezifo ezinje nge-hypotension, isifo seswekile, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kunye
I-Orlistat ekhuthazwayo i powder (96829-58-2) Isisombululo
I-dose ephakanyisiweyo ye-Orlistat powder enye ye-120-mg capsule kathathu ngosuku kunye nesondlo ngasinye esisisiseko esineziqhamo (ngexesha okanye ukuya kwi-1 iyure emva kokutya). Amanani angaphezulu kwe-120 mg kathathu ngosuku ayengaboniswa ukuba anikezele inzuzo eyongezelelweyo.
Abantu kufuneka babe kwi-dietary balance, eyancitshisiwe-khalori equlethe malunga ne-30% yeekhalori kwioli. Ukutya kwamaxesha amaninzi, i-carbohydrate kunye neprotheni kufuneka kuhanjiswe ngaphezu kwezidlo ezintathu eziphambili. Ukuba isidlo silahleka ngezinye izihlandlo okanye siqulethe i-fat, i-dose ye-Orlistat powder ingashiywa.
Ngenxa yokuba i-Orlistat powder ibonakalisiwe ukunciphisa ukufakwa kweevithamini ezinamafutha kunye ne-betacarotene, abantu kufuneka bacetyiswe ukuba bathathe i-multivitamin equkethe iivithamini ezinyibilikayo ezinamafutha ukuqinisekisa ukondla okwaneleyo. Ngaphandle, isongezelelo sevithamini kufuneka sithathwe ubuncinci iiyure ze-2 ngaphambi okanye emva kolawulo lwe-Orlistat powder, njengakwixesha lokulala.
Imiphumo emibi ye-Orlistat powder (96829-58-2)
Kuyinto eqhelekileyo ukuqaphela imiphumo emibi ye-Orlistat powder xa usisebenzisa. Unokufumana ezinye zeempembelelo okanye kungekhona nje emva kokuthatha nayiphina imithi. Uninzi lweziphumo eziza kunye nokusetyenziswa kwe-Orlistat powder zihlobene nendlela esebenza ngayo kwinkqubo yakho yokutya. Zivame ukuba zinyameko kwaye zenzeke rhoqo xa uqala unyango. Kwenzeka kwakhona emva kokuba uthathe isidlo esikhulu seoli. Ngenhlanhla, uninzi lwalo luya njengoko unyango luqhubeka kwaye emva kokulandela ukutya okulungileyo.
Ezi zilandelayo ziphumo zecala eziqhelekileyo:
▲ Iintlungu zesisu / ukuphazamiseka
▲ Ukukhutshwa kwamanzi
▲ Ukugqithisa kwesikhumba esilula
▲ Umqolo obuhlungu
Ngaphandle koko, ukuba uhamba nawuphi na wale miphumo emibi, kufuneka uyiphathise njengongxamiseko kwaye ugqirha ugqirha ngokukhawuleza. Bazi;
▲ Intlungu ebuhlungu besisu esingahambi.
▲ Ukuvuthwa okanye ukugqithisa ngokweqile
▲ Unzima ukugwinya